Golaha Walaalaynta Bulshada Iyo Qabyaalad Diidka oo looga Dhawaaqay Garoowe
Saturday December 02, 2017 - 16:35:24 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Shirweyne lagaga hadlayey walaalaynta bulshada iyo ciribtirka qabyaaladda ayaa xalay lagu soogabagabeeyey xarunta Jaamacadda Bariga Afrika ee Magaalada Garoowe.
Shirweynahaan waxaa kasoo qaybgalay ergooyin ka kala yimid magaalooyinka Gaalkacyo, Burtinle, Buuhoodle, Laascaanood, Garoowe, Qardho, Boosaaso iyo Baran, waxaana lagaga dooday: siyaabaha iyo waddooyinka ugu munaasabsan ee dadkeena loo walaalayn karo, qabyaaladda iyo isnacaybkana looga saari karo, dhismaha Gole u taagan walaalaynta, axdiga golaha, qorshaha Golahaiyo xulashada guddiyadii maamul ee Golaha
1. In dadkeena meel ay dunida kajoogaanba ay haystaan dhibaatooyin kadhashay qabyaaladda iyo dagaallada sokeeye, dhibaatooyinkaasna ay soomaali iyadu aasaas u ahayd, loona baahanyahay inay wax kaqabato; waayo ruqo ninki ilahaa dabada kagataaganyahay ma kacdo.
2. Si arrintaan wax looga qabto inay lagama maarmaantahay inay is-uruursadaan dadka wanaagasan ee xilkaska ah, ayna isu kaashadaan walaalaynta bulshada soomaaliyeed iyo tirtirida cuqdadaha iyo kala shakiga dhexyaal.
3. In la dhiso Gole shaqadiisu tahay hirgalinta barnaamijka walaalaynta iyo qabyaalad-diidka oo ay ku jiraan dad xul ah oo qaybaha bulshada ka socda, waxaana loogu wanqalay: golaha walaalaynta bulshada & qabyaaladdiidka.
4. Shirweynuhu wuxuu ansixiyey axdiga golaha iyo qorshihiisa shaqo.
5. Waxaa la doortay guddiga joogtada ah ee golaha dhexe iyo shirguddoonkoodii. Waxaa kale oo la doortay guddoomiyaha guddiga fulinta ee Golaha walaalaynta Eng. Maxamed Cali Cabdi (Badwi).
Xafladda xiritaanka Shirweynaha oo lugu qabtay Xarunta Jaamacadda Bariga Afrika ee Garowe waxaa ka soo qaybgalay madaxweyne kuxigeenka P/land Eng. C/xakiin C/lahi X. Cumar Camey, wasiiro, isimo, Cuqaal, Culimo, Ganacsato, Bahda waxbarashada, bahda Saxaafadda, suugaan yahano iyo ergooyinkii gobolada ka yimid.
Ustaad Faarax C/laahi Cumar Gardan ayaa xafladda ku furfuray mahadcelin, soodhaweyn iyo warbixinkooban, kadibna waxaa hadal walaalnimada muslimiinta kahadlaysa soojeediyey Maamulaha Jaamacadda Bariga Afrika faraca Garoowe Sh. Maxamuud XaajiYuusuf .
Intaa ka dib Madaxa guddiga qabanqaabada shirka walaalaynta Sh. Axmed C/samad iyo guddoomiyaha fulinta Golaha Walaalaynta Eng. Maxamed Cali ayaa ka warbixiyey ahmiyadda walaalaynta bulshada, baahida loo qabo iyo marxaladihii uu soo maray abaabulka barnaamijkaan.
Waxaa kale oo ay wax ka tilmaameen ujeeddooyinka loo aasaasay Golaha walaalaynta, shaqooyinka uu qabanayo, waddooyinka loo marayo shaqooyinkaas, hababka iyo siyaasadaha la raacayo iyo waliba miraha lagafilanayo.
Waxay codsadeen in barnaamijkaan laga wada-shaqeeyo, lana taageero maamul iyo dadweynaba, waxayna Cadeeyeen in Golahaani dadkeena u dhexeeyo oo aysan cid gaar ah wadan, waana u furanyahay qof walba oo ka qaybqaadanaya walaalaynta dadkeena, qabyaaladdana ina la ciribtiraya.
Sh. Axmed C/samad wuxuu intaa ku daray: Golahaan waa mid ijtimaaci ah oo aan siyaasad iyo dano gaara lugu ku lahayn, wuxuuna yiri: siyaasadda dad badan baa ku mashquulsan laakiin shaqadaan way bannaantahay, wuxuuna ku sii darat haddii shaqada Golaha walaalaynta siyaasad dhexgasho waxaa dhici karta in inta wada shaqaynaysa kala bayrto.
Mudane Maxamuud Ismaaciil oo magaca ganacsatada ku hadlayey ayaa isna caddeeyey inay ganacsato ahaan taageerayaan barnaamijkaan.
Waxaa kalimad muhiim ah soojeediyey Suldaan C/qani Qorane ooyiri: soomaali cid ay la collowdo ayay weyday. Markaas ayay iyadu cadow iska dhigatay.
Waxaa isna dhankiisa bogaadiyey barnaamijkaan WasiirkaDeegaanka Dr. Cali C/laahi Warsame oo yiri: barnaamijkaan waan soo dhawaynayaa, waana kii ugu mudnaa ee aan maqlo, wuxuuna si gaara farta ugu fiiqay saamaynta jahliga iyo faqrigu ay ku leeyihiin faafitaanka qabyaaladda.
Gabagabadii waxaa xafladda soo gunaanaday Madaxweyne Kuxigeenka P/land Eng. C/xakiin Cumar oo barnaamijkaan soo dhaweeyey, kana hadlay sida barnaamijkaan loogu baahanyahay, wuxuuna ballanqaaday inay dowlad ahaan kala shaqayn doonaan Golaha sidii uu ku gaari lahaa guul.
Ammaanka Baydhabo oo La Adkeeyay iyo Gaadiidka oo La Mamnuucay Xilliyada Habeenkii.
20/05/2018 - 10:17:42